Sharon Adcock, Author at NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE
ပင်မစာမျက်နှာ » Author Archives: ရှာရုန် Adcock
Author Archives: ရှာရုန် Adcock
SolidAnim Introduces SolidTrack စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ & Ross ကကြေညာခဲ့ပါတယ် | SolidTrack ဖြေရှင်းချက်
SolidAnim, ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, SolidTrack ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ SolidTrack ထိုကဲ့သို့သော Warcraft က The Looking Glass မှတဆင့်အီဂျစ်, Ghostbusters နှင့်အဲလစ်၏ဘုရားအဖြစ်ဇာတ်ကားတွေအပေါ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထိုကဲ့သို့သောဠာအဖြစ်ပြသထားတယ်: တစ်ဦးက Spacetime Odyssey နှင့် DaVinci ရဲ့နတ်ဆိုးများ။ SolidTrack ၏ဗားရှင်းအသစ်က rendering ဂိမ်းအင်ဂျင်, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး5plug-in ကို, တီထွင် ...
Bluefish444 IBC 2016 မှာနယူးအရည် IngeSTore Software များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
Bluefish444, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K / 2K / HD ကို / SD က SDI ကဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူ, အ Bluefish1.1 က်ဘ်ဆိုက်ကနေအခမဲ့ရယူနိုင်သောအရည် IngeSTore ဗားရှင်း 444, ကြေငြာလိုက်သည်။ IngeSTore v1.1 မကြာမီ IBC 2016 ပြီးနောက်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ IngeSTore အားလုံး Bluefish444 ကဗီဒီယိုကတ်များနှင့်သဟဇာတ Bluefish444 ရဲ့အခမဲ့ Multi-ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူ software ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ archive ကို, ပြင်ဆင်ရန်, encoding ကများအတွက်ရေပန်းစားမီဒီယာဖိုင်များ SD က / HD ကို / 3G SDI မျိုးစုံကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလိုင်းများဖမ်းယူ ...
IBC 2016 မှာ MultiCAM စတူဒီယို၏ MultiCAM စနစ်များစတင်နယူးဗားရှင်း
MultiCAM စနစ်များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုစနစ်များထုတ်လုပ်သူ, IBC 2016 မှာ MultiCAM စတူဒီယို၏ဗားရှင်းအသစ်ဖွင့်သည်။ MultiCAM STUDIO ထိုကဲ့သို့သောဂီတပွဲတော်များ, အားကစား, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညီလာခံ, နိုင်ငံရေးနှင့်များစွာသောအသံလွှင့်လုပ်ငန်းများအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်သောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုထံအပ်နှံထားတဲ့ All-In-One တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Videlio, ULT Tunisie ဂျော့ဂ်ျတောင်းတက္ကသိုလ်, အဖြစ်ဖောက်သည် ...
XDT IBC 2016 မှာအမြင့်မြန်နှုန်းမှာ Data လွှဲပြောင်း Software များကိုရည်ညွှန်းပြသ
XDT Pty Ltd မှ, မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာလွှဲပြောင်းဘို့အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု developer န့်အသတ် client နှင့် 2016Mbits မှတက်၏ server ကို bandwidth ကိုပါဝင်သော၎င်း၏ရေပန်းစားအခမဲ့ဗားရှင်းပါဝင်သော IBC 25 မှာလောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းပြနေသည်။ လောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ် Windows, Mac OS X နဲ့ Linux ကိုပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်ကာအသုံးပြုရလွယ်ကူ, မြန်နှုန်းမြင့် Point-to-point data တွေကိုလွှဲပြောင်း application ကိုကယ်တင်တတ်၏။ ...
Mediaproxy IBC 2016 မှာအများစုကအဆင့်မြင့် LogeServer Suite မိတ်ဆက်
Mediaproxy Pty ။ , Ltd. , ထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်မှု, အကြောင်းအရာသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်က IBC 2016 မှာထုတ်ကုန်များ၏ယင်း၏ LogServer suite ကိုမှ updates များကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းမိတ်ဆက်ပေးဦးမည်ကြေညာခဲ့သည်။ LogServer ထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်မှု, အကြောင်းအရာသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ LogServer built-in Real-time ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အတူ OTT streaming များသတင်းရပ်ကွက်များအဘို့အဆင့်မြင့်ထောက်ခံမှုပေးသည် ...
Bluefish444 ဗီဒီယို, အသံ, ဒေတာများ I / O ကဒ်များ၏နယူး KRONOS Range ကြေညာ
multi-Channel ကိုထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ Post ထုတ်လုပ်မှု Bluefish4 အတွက် IP ကို ​​Workflows ကျော်ဗီဒီယိုများအတွက် 60K 2022p, High Dynamic Range, အမြင့် Frame ကနှုန်း SDI နှင့် SMPTE 444 ထောက်ခံမှု, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K / 2K / HD ကို / SD ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူငါ / အဆိုပါ Windows, Mac OS X နဲ့ Linux OS များအတွက်တော့အိုကတ်များ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ I / O ကတ်များ၏ KRONOS အကွာအဝေးကိုမိတ်ဆက်။ အသစ်လိုင်းတိုးချဲ့ ...
SolidAnim SolidTrack စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးမိတ်ဆက်
SolidAnim, ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, SolidTrack စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကိုမိတ်ဆက်။ တစ်ဦးက Spacetime Odyssey နှင့် DaVinci ရဲ့နတ်ဆိုးများနှင့် Ubisoft ၏ The လေယာဉ်အမှုထမ်းဗီဒီယိုဂိမ်း: SolidTrack ထိုကဲ့သို့သော Warcraft က The Looking Glass မှတဆင့်အဲလစ်, အီဂျစ်နှင့် The လမ်းလျှောက်၏ဘုရား, ထိုကဲ့သို့သောဠာအဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးအဖြစ်ဇာတ်ကားတွေအပေါ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ SolidTrack ၏ဗားရှင်းအသစ်က rendering ဂိမ်းအင်ဂျင်, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။ ...
Bluefish444 နှင့်အတူ AlphaDogs ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုဘူတာစားသုံးမိပါ
AlphaDogs ရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အသစ်မီဒီယာများအတွက်ဖန်တီးမှုန်ဆောင်မှုများအပြည့်အဝ suite ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ Burbank-based post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှင့်ဒီဇိုင်းစတူဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒေသများအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သော်လည်း, အာလဖ Dogs ကိုစီမံကိန်းများ၏အမြောက်အများ post ကိုထုတ်လုပ်မှုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး, ဗီဒီယိုပြီး, အရောင်ဆုံးမခြင်း, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, အသံကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, Reality TV နဲ့လွတ်လပ်သောအင်္ဂါရပ်များ၌ရှိကြ၏ ...
SolidAnim Partner Animatrik ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဒီဇိုင်း Inc ကိုအတူ Warcraft ထဲမှာစစ်ပွဲမှသွား
SolidAnim, On-set ကို virtual ခြေရာခံခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် visualization ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၎င်း၏ SolidTrack စနစ်ကယင်း၏ကနေဒါဖက်အားဖြင့်ရုပ်ရှင် Warcraft အပေါ် previz နှင့်ခြေရာခံဘို့အသုံးပြုသွားမည်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, Animatrik ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဒီဇိုင်း Inc ကို Warcraft ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမော်ကွန်းစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် Duncan ကဂျုံးစ်နှင့်ဂျုံးစ်, ချားလ်စ် Leavitt နဲ့ Chris Metzen ကရေးသား။ ဒါဟာ Warcraft ဗီဒီယိုဂိမ်းအပေါ်အခြေခံသည် ...
SolidAnim CineGear 2016 မှာ SolidTrack နှင့်မစ္စတာMéliès၏နယူးဗားရှင်းမိတ်ဆက်
SolidAnim, ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, Cinegear 2016 မှာ SolidTrack ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်။ တစ်ဦးက Spacetime Odyssey နှင့် DaVinci ရဲ့နတ်ဆိုးများ: SolidTrack ထိုကဲ့သို့သောအဆိုပါ Looking Glass မှတဆင့်အဲလစ်, Warcraft နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဠာအဖြစ်လမ်းလျှောက်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးအဖြစ်ဇာတ်ကားတွေအပေါ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ SolidTrack ၏ဗားရှင်းအသစ်က rendering ဂိမ်းအင်ဂျင်, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး5plug-in ကို, တီထွင် ...
SolidAnim & ရော့စ် | အသံလွှင့်အာရှ 2016 မှာ SolidTrack ဖြေရှင်းချက်ဟန်ပြ
RossSolidTrack, အသံလွှင့်အာရှ 2016 မှာရော့စ်ဗီဒီယိုတဲအတွက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည်သည့်: SolidAnim နှငျ့ Ross ဗီဒီယိုသူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်ဘုံဖြေရှင်းနည်းကိုကြေညာ။ RossSolidTrack အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးသုံးနိုငျတဲ့သဲတစ်လောကလုံးကင်မရာခြေရာခံခြင်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး, ဘာမှပေါ်မှာ။ မူပိုင်ခွင့် optical ခြေရာခံခြင်းနည်းပညာအပေါ်အခြေခံပြီး, RossSolidtrack ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲမည်သည့်ကင်မရာတိကျ Real-time ခြေရာခံ data တွေကိုကယ်တင်တတ်၏ ...
SolidAnim Wonderland ၏ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အဲလစ်အတွက် Looking Glass မှတဆင့်ကြည့်ခြင်း
SolidAnim, On-set ကို virtual ခြေရာခံခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် visualization ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၎င်း၏ SolidTrack စနစ်ကအဆိုပါ Looking Glass မှတဆင့်ရုပ်ရှင်အဲလစ်အပေါ် previz နှင့်ခြေရာခံဘို့အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်ကြေညာခဲ့သည်။ မေလ 31, 2016 ၏အဖြစ်, ရုပ်ရှင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော် $ 105 သန်းထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Looking Glass မှတဆင့်အဲလစ်ဟာ 2010 ရုပ်ရှင် Wonderland ထဲမှာအဲလစ်, ဖို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ် ...
Mediaproxy အသံလွှင့်အာရှ 2016 မှာ Logserver Suite မှအများအပြားအပ်ဒိတ်များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
Mediaproxy Pty ။ , Ltd. , ထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်မှု, အကြောင်းအရာသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, အသံလွှင့်အာရှ (BCA) 2016 မှာထုတ်ကုန်များ၏ယင်း၏ LogServer suite ကိုအကြိမ်ကြိမ် updates များကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေဖို့အမြဲတမ်းပွဲနှင့်အခန်းအနား-based တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်အရေအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာနေသည်။ LogServer ထုတ်လွှင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဖြေတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန် OTT streaming များသတင်းရပ်ကွက်များနှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေး ...